တောင်ရေးမြောက်ရေး စာစုများ: ဘိုးဘိုးအောင်ရဲ့ ၀လုံးလေးများ
ငယ်ငယ်က အမေပြောဖူးတဲ့ ပုံပြင်ထဲမှာ ဘိုးဘိုးအောင် ပုံပြင်လေးကို မှတ်မိနေပါသေးတယ်။ မှတ်မိတယ် ဆိုတာ အစအဆုံးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ချို့ အပိုင်းလေတွေပါ။ ကျွန်တော် နားလည်သလောက်တော့ ဘိုးဘိုးအောင်က တန်ခိုးရှင်။ တစ်ခါတော့ ဘုရင်နဲ့ ပြဿနာတက်တော့ ဘုရင်က ဘိုးဘိုးအောင်ကို သတ်မိန့် ပေးသတဲ့။ အဲဒီတော့ ဘိုဘိုးအောင်က ရီတာပေါ့။ တန်ခိုးရှင်ကိုး။ မင်းက ငါ့ကို သတ်မယ်ပေါ့ အေး သတ်ဖို့ မစဉ်းစားနဲ့ ငါရေးထားတဲ့ ၀လုံးတစ်လုံးကို ပဲ မင်းပျက်အောင် ဖျက်ဦး လို့ ဆိုသတဲ့။ အမေက အဲဒီ အကြောင်း စပ်ထားတဲ့ သီချင်းလေးလည်း ဆိုပြပါသေးတယ်။ မှတ်မိတဲ့ အပိုဒ်ကလေးကို အောက်မှ ရေးထားပါတယ်။ အဲ စာလို့တော့ မဖတ်နဲ့ပေါ့ဗျာ။ ကိုယ့်ဟာကို သံစဉ်လေး ထည့်ဆိုကြည့်ပေါ့နော်။
….'သတ်ရန်ပင် မဆိုထားနှင့်…. ထင်ရှားအောင် ပြဦးမည်….. ငါရေးထားပါတဲ့ ၀ တစ်လုံးကိုသာတည် ….. မင်းပျက်အောင် ဖျက်နိုင်ရင် ငါ့ကို နိုင်ဦးမည်'….တဲ့။
ဇာတ်လမ်းထဲမှာ တော့ ဘိုဘိုးအောင်က အဲလိုပြောပြီး နံရံမှာ ၀လုံး တစ်လုံးရေးလိုက်တယ်တဲ့။ ပြီးတော့ ဘုရင်ကြီးကို ဖျက်ခိုင်းတာပေါ့။ အဲဒီ ၀လုံးကို အရင် ပျက်အောင် ဖျက်ဦးပေါ့။ ဖျက်နိုင်မှ ငါ့ကို သတ်ဖို့ စဉ်းစား တဲ့။ ဘုရင်ကြီး လည်းအဲဒီဝလုံးကို ဖျက်ဖို့ကြိုးစားတာပေါ့။ ပထမဆုံးအကြိမ် အဲဒီ ၀လုံးကို ဖျက်လိုက်တော့ ၀ လုံးနောက်တစ်လုံးပေါ်လာတယ်။ ၀လုံး နှစ်လုံး ဖြစ်သွားရော။ ဒါနဲ့ ဘုရင်ကြီး လည်းပေါ်လာ တဲ့ ၀လုံးနှစ်လုံးကို ဖျက်ဖို့ ကြိုးစားပြန်တယ်။ ဒါပေမယ့် မပျက်ပဲ ၀လုံးက သုံးလုံး ဖြစ်သွားပြန်ရော။ အဲလို အဲလိုနဲ့ သူဖျက်ဖို့ ကြိုးစားလေလေ ၀လုံးက ပွားပွားလာ ပြီး နောက်ဆုံးတော့ နန်းတော် နံရံ တစ်ခုလုံး ၀လုံးတွေကြည့် ဖြစ်သွားပါလေရောတဲ့။ ဘုရင်ကြီး လည်း ဘိုးဘိုးအောင် ကို အရှုံးပေးလိုက်ရတော့တာပေါ့။
ကျွန်တော်တို့ ဘ၀တွေလည်း အပေါ်က ပုံပြင် အတိုင်းပါပဲ။ ပေါ်လာတဲ့ ၀လုံးတွေကို လိုက်ဖျက်ရင်းနဲ့ ဘ၀တစ်ခုလုံး ၀လုံးပုံကြီး ထဲ ရောက်သွားတော့တာပဲ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ၀လုံးဆိုတာတွေကတော့ လိုအင်ဆန္ဒ တွေပါပဲ။ ငယ်ငယ်ကတည်းက လိုအင်ဆန္ဒတွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခု ပေါ်လာတာ ဘယ်တော့ မှ မပြီးတော့ဘူး။ ကြီးလာလေလေ ပိုများလာလေလေပါပဲ။ ဘိုးဘိုးအောင်ရဲ့ ၀လုံးတွေလိုပဲလေ။ ကျွန်တော်တို့က ဖျက်ဖို့ ကြိုးစားလေ ထပ်ပေါ်ပေါ်လာလေပဲ။
ကျွန်တော် မွေးခါစ ကလေးဘ၀ကတော့ မိခင်နို့ရည်ကလွဲလို့ ဘာမှ မမက်မောဘူး။ မိခင်နို့ရည်ကို ၀အောင်သောက် ပြည့်စုံသွားပြီဆိုတော့ ကြတော့ အစားအစာ ဆိုတာ မက်လာပြန်ရော။ ဒါနဲ့ လိုအပ်တဲ့ အစာအဟာရတွေရပြီး ပြန်တော့ ဟော ကစားစရာ အရုပ်တွေ လိုချင်ပြန်ရော။ အစားအစာဆိုတာ ဆိုတဲ့ လိုအင်ဆန္ဒကလည်း မပျောက်သွားဘူးလေ။ ထပ်ပိုလာတာပဲရှိတာ။
ပြီးတော့ ကျောင်းတတ်တဲ့ အရွယ်မှာလည်း မျိုးစုံ လိုချင်တာပဲ။ စာအုပ် အသစ်၊ ခဲတံ အသစ် ပေတံ အသစ်နဲ့ ဘယ်တော့ မှ မပြီးနိုင်တော့ဘူး။ အထက်တန်းကျောင်းပြီးရင် ဘယ်တက္ကသိုလ် ရမှ ဘာမှနဲ့ ၀လုံးတွေ ထပ်ထပ် ပေါ်လာတာပဲ။ ကိုယ်က လိုက်ဖျက်ဖို့ ကြိုးစားနေသ၍ (လိုအင် ဆန္ဒတွေကို ပြည့်အောင် ဖြည့်ဖို့ ကြိုးစားနေသ၍) ဘယ်တော့ မှမပြည့်ပါဘူး။ တစ်ခုပြီး တစ်ခု ထပ်လာမှာပဲ။
အဲဒါကြောင့် လူ့အလို နတ်မလိုက်နိုင်ဆိုတဲ့ စကားပုံပေါ်လာတာ ထင်ပါရဲ့။ မိတ်ဆွေအနေနဲ့ တော့ မသိဘူး။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့တော့ လိုအင်ဆန္ဒတွေက တကယ်ကို မပြီးနိုင်ဘူးဗျာ။ တစ်ခုပြီး တစ်ခု သူ့ဟာသူကို ပေါ်ပေါ်လာတာ။ တစ်ချို့ဟာတွေက မရှိသေးခင်က သိပ်မဟုတ်ဘူး။ ရှိပြီးသွားရင် ပိုဆိုးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အရင်ငယ်ငယ်တုန်းကဆို ဟန်းဖုန်းဆိုတာ မရှိပဲ နေလာတာ။ အခုဟန်းဖုန်းဆိုတာ ကိုင်ချင်တိုင်း ကိုင်နေကြ ပြီဆိုတော့ ပြီးသွားပြီလား။ မပြီးဘူးခင်ဗျ။ ဟို handset လိုချင်တယ် ဒီ handset လိုချင်တယ် ဖြစ်ပြန်ရော။ အဲဒီ လိုအင်ဆန္ဒကလည်း ဘယ်တော့ မှ မပြီးဘူးဗျ။ အသစ်ပေါ်လာတိုင်း ထပ်ထပ် ဖြစ်နေတာ။
အေးဒါဆိုရင် မင်းပြောတာတော့ ဟုတ်ပါပြီးကွာ။ ငါတို့က အဲလို မလိုချင်ရဘူးဆိုရင် ဘာလုပ်နေရမှာလဲ။ ဘုန်းကြီး ၀တ်ရမှာလားလို့ တော့ စောဒက မတတ်လိုက်ပါနဲ့ မိတ်ဆွေ။ ကျွန်တော်လည်း သူလိုကိုလိုထဲကပါပဲ။ လိုအင်ဆန္ဒတွေကို လျော့နိုင်သမျှ လျှော့ရင် စိတ်ချမ်းသာတယ် ဆိုတာ ပြောချင်လို့ပါ။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ နေနေတာကိုက ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းကမ္ဘာကြီးထဲမှဗျ။ တအားကြီးတော့ လည်း လျှော့ လို့မရဘူး။ ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာ တကယ် မလိုအပ်တာကို လိုချင်နေလို့ မကောင်းဘူးဆိုတာကိုပါ။
ဥပမာ ကားကောင်းကောင်းတစ်စင်းစီးနိုင်နေတဲ့ သူက သူ့ထက်မော်ဒယ်ပိုမြင့် ပိုကောင်းတဲ့ ကားကို စီးချင်ပြန်တယ်။ ဒါကတကယ်ဆို အပိုလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ မော်ဒယ်မြင့်ကားက တစ်ခုခုအတွက် တကယ် သုံးဖို့ လိုအပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့။
ဒါပေမယ့်ခက်တာက အခုကျွန်တော်တို့တွေက သာမာန်လူတွေဆိုတော့ လိုအင်ဆန္ဒတွေဖျောက်ဖို့ ဘယ်လွယ်လိမ့် မလဲ။ ကျွန်တော်သိသလောက် လောက် အဲဒီဝလုံးတွေကို နိုင်တဲ့ နည်းကတော့ တနည်းပဲ ရှိတယ်။ ဗုဒ္ဓ ရဲ့ တရားပဲ။ လူတော်တော်များများက သိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လိုက်နာဖို့ ခက်တယ်ဗျ။ အဆင့်တစ်ဆင့်ကို ရောက်မှ အားလုံးကို လိုက်နာနိုင်မှာ။
အဲလို အဲလိုတွေ ဆရာကြီး လုပ်ပြောနေလို့ မင်းကရော ဘယ်လိုလဲကွ ၀လုံး တွေ ဖျက်နိုင်ပြီလားလို့ မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်က မေးတော့မှ သတိရပြီး ကျွန်တော့် အခန်းနံရံကို လှည့်ကြည့်မိလိုက်ပါတယ်။ ..... အလိုလေး...... နံရံ တစ်ခုလုံး ၀လုံးတွေ ပြည့်လို့ပါလား……
Posted by Moe Tain Nyo at 2:47 PM
ဝေလင်း May 17, 2010 at 12:36 AM
မှန်တာပေါ့အစ်ကိုရာ.. မဖျက်နိုင်လိုက်တဲ့ ၀လုံးတွေရော နောက်တိုးလာတဲ့ ၀လုံးတွေရော..
Rita May 17, 2010 at 9:44 AM
မြန်မာပြည်က ဒုက္ခတွေအကြောင်း ရေးမယ် ထင်နေတာ။
ဘိုးဘိုးအောင်ရဲ့ ဝလုံးတွေလို... တစ်လုံးပြီး တစ်လုံး တိုးလာလိုက်တာ... မပျက်နိုင်ဘူး။
Moe Tain Nyo May 17, 2010 at 10:50 AM
မရီတာ ပြောတာ မှန်တယ်ဗျို့ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ ဒုက္ခတွေ ကလည်း ဘိုးဘိုးအောင်ရဲ့ ၀လုံးတွေလိုပဲ တစ်ခုပြီး တစ်ခု ပေါ်လာနေတာပဲ... ဟူး...
စကားပုံများ၊ ဆိုရိုးစကားများ၊ ဥပမာများ